Ciidanka Kenya oo dill iyo dhaawac u geystay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. – Weheliye.com
Ciidanka Kenya oo dill iyo dhaawac u geystay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
March 3, 2019 A.Hussein Wararka 0
Wararka ka imaanaya deegaanka faaxfaxdhuun ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidamada Kenya ay ku dilaan sarkaal ka tirsanaa ciidamada xooga dalka Soomaaliya halka sarkaal kale ay ku dhaawaceen deegaa kaas.
Korneyl Aadan Axmed Xirsi Rufle oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka xooga dalka ee Gobolka Gedo oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Ciidamada Kenya ay sarkaal ka tirsan Militariga soomaaliya ku dileen deegaanka faaxfaxdhuun ee gobolkaas, islamarkaana mid kalena ku dhaawaceen deegaankasi.
Sida uu sheegay Korneyl Rufle
ciidamada Ciidamada Kenya ayaa ka xeysteen askar ka tirsan Militariga Soomaaliya oo tiradooda lagu qiyaasay ku dhawaad 123 askari, kuwaasi oo loo ka xeeyay dhanka xadka ee dalka Kenya.
Korneyl Rufle ayaa shaaca ka qaaday in ay cabsi xoogan ay soo wajahday ciidamada ku sugnaa deegaanada Buusaar iyo deegaano kale oo ay isla joogaan ciidamada Kenya iyo kuwa xooga dalka.
Ma jirto wax war ah oo kasoo baxay dowladda soomaaliya oo la xariirta xad gudubka ay dowladda Kenya kula dhaqaaqday sarakiisha ka tirsanaay ciidamada xooga dalka soomaaliya,iyo ciidamada la sheegay in ay ku kaxeysatay xadkeeda.
Xildhibaan Fiqi”Ciidamada Fahad Yasin ee NISA sidii Baydhabo uma qabsan karaan Cadaado:…?
Madaxweyne Farmaajo oo booqday dhaawacyada yaala isbitaladda magalada Muqdisho+Sawiro.